Makumi mazana mana + Akatemwa nevanyori Vasingazivikanwe ve 400 - Quotes Pedia
406 makotesheni uye kutaura
Hupenyu husingafungidziriki. Iwe haamboziva zvinoitika iyo inotevera nguva chaiyo. Mune mamiriro akadaro, isu tiri nguva dzose mushure mekuwana zvinhu zvakakoshera muhupenyu hwedu.
Dzimwe nguva, tinonzwa takaderera uye takaora mwoyo. Idiki zano rekukurudzira rinogona kuita zvishamiso mumamiriro akadaro. Saka, iyo Vanyori vasingazivikanwe vanogara varipo kuti vakupe iyo diki dudziro yekukurudzira uye kukurudzira kuti usazonzwa wakaderera kana kushungurudzika nemukana chero.
Chikonzero chikuru chekuti vanyori ava vauye nemafungiro ekunyora zvavanofunga hazvisi zvekuda chero zita rechikwereti kana zita nemukurumbira, asi vari kungozviitira nechinangwa chekuti vakupe imwe yakanaka uye yakanaka vibes kuti iwe ugone dhonza kunze kwehistle-bustle uye uwane simba rekuita chimwe chinhu chitsva nekugadzira nenzira yako.
izvi Quotes nekusazivikanwa gara uchitaura zvekuparadzira rudo rwakakukomberedza. Rudo irwo simba riye rinogona kuumba kunyange zvakaipa kune zvitsvene.
Nyika ino izere nokuvenga uye neshungu. Rudo rune simba rekuporesa kuti riwedzere pfungwa dzese dzisina kunaka kubva kune chero munhu uye rizadza munhu iyeye nekukwanisa kushandura zvinhu zvakanaka uye hutsva.
Kana iwe uchinyatsoda kuchinja mumwe munhu uye woburitsa mweya wakanaka kubva maari kana iye, pamwe uyo akafa mukati memunhu iyeye makore kumashure, iye chinhu chimwe chete chaungamboita kuda munhu iye iye asina mhosva.
Rudo rwune simba rakakura kuporesa chero munhu, uye mweya iwoyu unogona kushandura zvinangwa uye zvinangwa zvechero munhu zvachose. Tinowanzo tenderera, uye rudo ndiyo chete simba rinogona kukudzosera kunzira yako zvakare zvekare.
izvi vanyori vasingazivikanwe wauya pano kukurudzira nematanho akanaka, kukudzidzisa nezve kukosha kwerudo uye kukurudziro, uye nekubatsira iwe kuti usimuke pese pese kana uchinge watadza zana. Iwe haumboziva kana ino nguva yechigumi neshanu ichazove iri yekubatsira kwako!
Kufambira mberi pakatarisana nedambudziko kunogona kunetsa asi vanhu vanogona kukunda kutya kwavo uye…
Usaedze kushandura vanhu; ingovada ivo. Rudo ndirwo runotichinja. - Asingazivikanwe
Isu tese takafanana asi takasiyana. Tese tine chimwe chinhu chinotisiyanisa kubva ku…
Usambofa wakavimba nevamwe. - Asingazivikanwe
Muhupenyu, tinouya tega toenda toga. Sezvo hupenyu hunopfuurira, tinoita hukama hwakawanda. Vazhinji vavo…
Verenga makomborero ako, kwete matambudziko. - Asingazivikanwe
Muhupenyu, maitiro ane basa zvakanyanya. Maonero edu uye zviito zvinotsanangura zvatiri. Maonero edu…
Usavimba mazwi, vimba nezviito. - Asingazivikanwe
Mashoko anodonha asina chinhu. Tinogona kugara ndokufunga pamusoro pezvinhu zvakasiyana zvatinoda ku…
Muhupenyu, unogona kusangana nemamiriro ezvinhu akasiyana apo iwe unganzwa kuda kurega. Munhu akura uye akangwara…
Zvimwe zvinhu zvinotora nguva. Ramba uine moyo murefu uye ramba uine tariro, zvinhu zvichaita zvirinani. - Asingazivikanwe
Inoti rwizi runodimbura neparuware kwete nekuda kwesimba raro, asi nekuda kwaro…
Hupenyu huri nani neshamwari dzechokwadi, uye ichokwadi! Kunyangwe tiine vanhu vazhinji vakatikomberedza, ikoko…
Muhupenyu, iyo hombe hondo yaunoda kuti urwe ndeye hapana mumwe kunze kwako. Ndizvo…
Iva nemwoyo murefu. Zvinhu zvakanaka zvinotora nguva. - Asingazivikanwe
Hupenyu hwakakosha. Vanhu vari muhupenyu hwedu vakakosha asi mukuita kwekuvandudza hukama,…
Munhu akangwara anoziva zvekutaura. Munhu akachenjera anoziva kana kutaura. - Asingazivikanwe
Munhu akangwara munhu anoziva zvekutaura pasi pemamiriro api naapi. Chiitiko icho chaanacho…
Hupenyu haumbofa wakatsetseka. Iwe uchave nezvakawanda zvikonzero zvekutsemuka, kunzwa kupwanyika, uye kuchema. Zvisinei,…
Hupenyu hunoshamisa uye ichokwadi. Isu hatizive kukosha kwezvimwe zvinhu kusvikira uye kunze kwekunge…
Kutanga zuva rega rega nekutenda uye zvinozopedzisira zvawedzera mweya wako kuti ugone…
Regedza kushuvira kuti chinhu chiitike uye enda unoita kuti zviitike. - Asingazivikanwe
Vanhu vane mhando dzekuda zvikuru pasi pano, zvakare vane husimbe zvakare. Tose tinoshuvira kubudirira mu…
Kurota ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvehupenyu hwedu. Kana mumwe munhu akasarota, munhu iyeye ane…
Usatya kutya kukundikana. Dzidza kubva pairi uye ramba uchienda. Kutsungirira ndiko kunogadzira kugona. - Asingazivikanwe
Kukundikana ndiyo shongwe yekubudirira. Pasina kukundikana, zvichakuomera kuti unakirwe nekuravira…
Kunyarara kuri nani pane zvisina basa mutambo. - Asingazivikanwe
Zviitiko zvakasiyana zvinotimutsa zvakasiyana. Asi isu tese tinofanira kudzidza kuita nenzira kwayo kumamiriro akasiyana kuti…
Runako harurevi munzira yaunotarisa, asi zviri munzira yaunozvibata nayo…
Zviite nekuti vakati haugone. - Asingazivikanwe